China WPC sintra plastika mpanamboatra sy mpamatsy | Gokai
Tombony amin'ny takelaka plastika WPC Sintra
1.Ny fijery sy ny fahatsapana dia mitovy amin'ny an'ny hazo voajanahary. Tsy dia mila fanamboarana sy fikojakojana firy izy io, satria tsy manodinkodina / mamoritra na hikorontana amin'ny sombin-javatra kely toy ny voajanahary
2.It dia mahatohitra ny hamandoana ary, noho izany, fitaovana maharitra be.
3.Izany koa dia misy fanoherana ireo ana-nofo sy holatra.
4. Tsy mora simba io ary tsy miharatsy na very ny mponiny.
5. Satria izy io dia vita amin'ny plastika namboarina sy fako hazo, dia fitaovana maharitra sy maitso izy io.
6.Misy fametahana fantsika, visy ary fatotra lehibe kokoa raha ampiasaina amin'ny WPC raha oharina amin'ny hazo voajanahary.
7. Mahazo laza izy io satria ialàna amin'ny fitrandrahana tsy ilaina ary vita amin'ny fako amin'ny fomba mahasoa tokoa hamoronana fitaovana fanatsarana nohatsaraina.
Fampiharana ny Takelaka plastika WPC Sintra
Ny takelaka plastika WPC Sintra dia ampiasaina amin'ny gorodona, latabatra, lalamby, fefy, fanaingoana, varavarankely, varavarana, akanjo ivelany na anatiny, ho an'ny fanamboarana ny varavarana sy ny varavarankely, ho fanomanana ireo rafitra matanjaka sy voavolavola, fampifangaroana ny fanaka amin'ny gorodona sns.
Teo aloha: ravina fitaratra akrilika 4 × 8
Manaraka: volontany PVC 5mm volontany